The Ultimate Guide To Kuhle Yoga Izindawo e-Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Italy > The Ultimate Guide To Kuhle Yoga Izindawo e-Italy
Omunye izinto ezihamba phambili mayelana Italy njengoba uya khona iholidi wukuthi akusiwona into nje bhala off uhlu lwakho ebhakedeni. Ungabuyela Italy ngokuphindaphindiwe futhi aqhubeke engakwazi ngokwanele kuleli zwe olunothile futhi okumnandi yayo fares, noma be bored nge yayo umlando kanye namasiko.
Njalo is charm lokhu gem saseMelitha ezweni enikeza cishe kunoma iyiphi inhlobo iholide ungacabanga. Umhlahlandlela uyotholakala samanje ukugxila Italian yoga izindawo. kodwa, ngisho uma uya ngoba iyindawo yoga, kunzima ukuziba lonke izimangaliso Italy sika.
Ukudla okusobala uzolamukela focus kusukela cuisine Italian liphakathi best in the world futhi izwe futhi endaweni ethandwa wabathanda amaholide Culinary. Izifunda ukukhanya entabeni kuhlanganiswe ebukekayo ogwini futhi wenze Italy i ethandwa uya khona ngoba ngebhayisikili amaholide, ingasaphathwa passion Surfers abaningi benomuzwa ngoba.
Ngo 2017, a irekhodi-breaking 60 izivakashi eziyizigidi ezingu evakashela leli zwe. Italy izizathu elidumile iholidi lapho uya khona okunjalo ngenxa ezimbili eziyinhloko. Okokuqala nje, ubuhle bemvelo cishe ngamunye edolobheni kanye nesifunda emhlabathini Italian kuyinto emangalisa. Unayo izivini aluhlaza nasemagqumeni libalele, izintaba obumangalisayo, kanye amaningi ogwini nge amangalisayo surfing ezidonsela futhi okudotshwa ebukekayo, waphenduka izikhumbuzo zomlando.
Ukukhuluma yomlando, empeleni lena isizathu sesibili elenza Italy onjalo indawo enkulu yokuya. esifundeni ngasinye, idolobha, nedolobha elincane licwile emlandweni. Njengoba iphuzu kokuqala okubi okwakugcwele eMbusweni WaseRoma, Italy angase abhekwe njengomuntu sombuso impucuko. I emakhulwini eminyaka adlule futhi ungeze isiko elichumayo letinyenti tebuciko nemasiko lonke emadolobheni amakhulu Italy. Kafushane, awukwazi unesizungu lapha.
Enye into enkulu mayelana Italy? Ngoba leli zwe obumbene kunalokho sekwephuzile futhi izifunda savela ucishe eceleni, kukhona ukudla okuhlukahlukene ezimbalwa zendawo, ngamunye distinctively kwenye. Lokhu kusho ukuthi unempahla eningi yokunambitha nokuzama phambili!
Verona Milan Izitimela
The Best Izindawo Ukwenze Yoga e-Italy
Tuscany iyisifunda emangalisayo e-Italy noyedwa kakhulu likufuna yizivakashi. Akukona nje esifundeni eqondene ezweni ukudla elenza wonke umuntu uzizwa njengo befika ezulwini, kungcono futhi zokungcebeleka eziyingqayizivele futhi izilungiselelo imvelo umxhwele. Izintaba encane nezigodi lapha ukudala ukubukwa emangalisa, kodwa futhi ekahle wineries, zazo Tuscany unemisebenzi.
Ngakho-ke, akufanele kube bamangale ukuqaphela ukuthi eziningi yoga ezikhoselweni e Tuscany futhi anikele iwayini yokunambitha izinkambo, noma baze ukunikela yoga newayini amakilasi zisuka, ngokuhlanganisa wonke zombili. iseluleko sami? Kwenze! Iwayini ungakwazi nambitha lapha emaphandleni elihle Tuscany kuyoba omunye izinkumbulo zakho nezinto esizithandayo esifisa ukuzifeza iholide wake.
Sardinia kungenye esifundeni ethandwa uma uvakashela e-Italy, futhi ngesizathu esihle. ugu lwayo aluhlaza kwenza kube uya khona intandokazi kokubili yogis kanye Surfers njengoba inikeza inala surf ezinhle, kodwa futhi izindawo emangalisayo ukuzindla noma ukwenza ilanga imikhonzo.
Lesi siqhingi esikhulu has cishe 2,000 amakhilomitha ugu, kodwa uma uya phakathi nezwe inikeza kwezifunda zezintaba nenala izintaba, uma lokhu futhi phakathi izintshisekelo zakho. Futhi, njengoba igama lalesi siqhingi kusho, fresh enhlanzi nezinye izinto zasolwandle kukhona eziningi lapha, ngakho ukunambitheka yakho efihlekile Uyoba ngoba uswidi.
Olbia ukuze Cagliari Izitimela
Cagliari ukuze Olbia Izitimela
Sassari ukuze Olbia Izitimela
Olbia ukuze Sassari Izitimela
Isifundazwe Ragusa usengowesikhathi futhi intandokazi yoga uya khona e-Italy futhi ozithandayo abenza kanye (kusukela ukuthi esisogwini esiqhingini saseSicily). Kusukela yoga phezu lolwandle ukuma-up gwedla yoga, ungathola konke inhliziyo yakho ufisa yoga namanzi ezemidlalo nayo yonke into phakathi. Ukuzijayeza Yoga ekhatsi Ragusa Uyothola ashona amabhethri yakho, ikakhulukazi uma uvakashela ke ngasekupheleni ihlobo lapho umoya uphelele futhi ilanga umnene ngaphezulu.
Messina ukuze Ragusa Izitimela
Syracuse ukuze Ragusa Izitimela
Taormina ukuze Ragusa Izitimela
Palermo ukuze Ragusa Izitimela
I-Amalfi Coast akuyona nje kuphela indawo yokuhlola Ukudla okumnandi noma ejabulela amanzi ezemidlalo usuku lonke kodwa futhi ozithandayo uya khona I-yogis emhlabeni wonke. I acwebile amanzi azure kanye ohelezayo ukwenza kube ekahle nje mayelana yimuphi umkhuba yoga ungacabanga, kusukela ilanga imikhonzo kwenza kube nzima ukuzindla amaseshini ngisho umdanso yoga.
Ayikho ukuvakashelwa e-Italy kungaba sidele Rome njengendawo ohamba kuyo uhambo lwakho. I waseTrevi, le Vatican, eNkundleni YaseRoma, iSistine Chapel enophahla lwayo oluhle, futhi iColosseum ngezinye zezimpawu zomhlaba ezivumelekile okufanele uzibone lapho ulapho.
Yize kungcono inhlokodolobha, 'I Lomuzi Waphakade' futhi unemisebenzi eminingi izindawo ethulile bazungeza, okuyinto ngokunembile ukuthi kungani i-yoga ezikhoselweni eRoma ezidume ngakho.
ubuciko inhlokodolobha emhlabeni, Florence is kufezeka iphupho uma uthanda iminyuziyamu emangalisa futhi obumangalisayo medieval izakhiwo. esidala, izakhiwo esimhlophe ezitaladini ebukekayo egandayiwe kuzokwenza uzizwe sengathi ufikile ephusheni Renaissance, okuyinto ngokunembile lokho Florence kuyinto. I Dome yisakhiwo sodumo kanye Uffizi Galleries kumane nje kuyizinto ezimbili izindawo udinga ukuvakashela ukuqonda kahle ukuthi kungani ukuzalwa kabusha yamasiko Europe waqala lapha ekupheleni Ephakathi.
Rimini ukuze Florence Izitimela
Pisa ukuze Florence Izitimela
Venice ukuze Florence Izitimela
Enginakho ukuvuma ukwenza: lapho ngivakashela Venice, Mina empeleni nomuzwa wokuthi ngangingaba kube umuntu ongenakhaya lapha futhi bajabule (kungabalwa isikhathi sasebusika, Nokho). Angiqondile ukululaza umzabalazo wabantu bengenamizi, kunjalo, kodwa nje ukuthi umuzi serene ngakho, naphezu izivakashi elisindayo traffic, ukuthi uzizwa nokuthula kanye imisele yayo sonke isikhathi. Ngaze ngazizwa ngingasafuni ukulala ngaphansi esibhakabhakeni evulekile lapha, ne balmy Italian wasebusuku obandayo nxazonke kwami ​​iphunga kolwandle, ngokudla izinsalela of kungakhathaliseki ukuthi trattorias bendawo emhlabeni babe, futhi nje ube ngakho, ngakho, ujabule.
fantasies zami zothando eceleni, Venice kumane enhle futhi kumelwe-bheka ngenkathi eseholidini e-Italy. Edolobheni elidala kukhawulwe isiqhingi yayo, kodwa zikhona amaningi yoga ezikhoselweni e Venice noma eduze nayo okuyizinto alunywe eminye kude ke (engxenyeni entsha edolobheni, ngaphesheya kwebhuloho).
Trento Venice Izitimela
Italy kanye Yoga
Yoga ubanjwe on e-Italy kunalokho muva, njengoba izwe liya liba ngaphezulu yisiphephelo izivakashi kanye yoga kubhekene imvuselelo ukuthandwa, omhlaba. Njengoba abaningi kakhulu we izivakashi eza Italy ufuna ezinye izinga umphefumulo efuna zikhathi futhi nazo yogis, kokuba yoga ezikhoselweni e-Italy etholakalayo kwaba isinyathelo okunengqondo esilandelayo.
Ngoba izwe iyona ethandwa kakhulu lapho uya khona iholidi eYurophu, akunandaba ukuthi yoga azange abe izimpande amaningi kakhulu bomdabu e-Italy. Umkhuba ubanjwe on ngokushesha ngakho futhi kahle kangangokuthi manje ungathola yoga ezikhoselweni e cishe kuzo zonke izingxenye Italy.
Ingabe ukulungele ukuhlola Italy? website engcono Oda Uqeqesha Amathikithi Ingabe Gcina Isitimela
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-italy-yoga%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Miriam is an avid world explorer and a yogi. I love exploring world cuisines and reading fiction from all over the world. When I am not busy, I expand my collection of teas and spends some time petting the neighborhood cats. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte
How To Get To Venice ngu zemininingwane Ukuze Easter